Fampidirana anaty akondro | Fiaretana haran-dranomasina
Fitantanana ny loza ateraky ny toetr'andro
Fitantanana ny fandrahonana eo an-toerana
Modely hitantana ny fizahantany
Fitantanana ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany
Fahasamihafana ny fivelomana
Fitantanana ny Faharetana ara-tsosialy
Fampielezana haran-dranomasina mifototra amin'ny larva
Famerenana amin'ny laoniny ny ala honko sy ny ahitra
Rafitra fikarakarana maloto sy fanamby efa misy
Inona no atao hoe fiompiana anaty rano?
Ny fiompiana anaty rano dia ny fiompiana, ny fiompiana ary ny fiotazana trondro, akorandriaka, ahidrano ary zavamananaina hafa amin'ny karazana tontolo rano. ref Mamokatra sakafo sy vokatra ara-barotra hafa ny fiompiana anaty akondro, fa ny teknika mitovy amin'izany dia azo ampiharina amin'ny toerana tsy ara-barotra hamerenana amin'ny laoniny ny toeram-ponenana, hamenoana ny tahiry dia ary hamerenana amin'ny laoniny ny karazan'olona efa tandindomin-doza sy tandindomin-doza. Ny aquaculture dia azo sarahina amin'ny karazany telo lehibe - ny rano velona, ​​ny ranomasina ary ny brackish.
Ny fiompiana rano velona dia misy renirano, farihy ary dobo
Ny fiompiana an-dranomasina dia miseho any amin'ny ranomasina malalaka, ny faritra intercoastal, ary ny lagoons an-dranomasina
Ny fiompiana anaty akondro dia miaina amin'ny tontolo anaty rano izay ny rano dia mifangaro amin'ny rano madio sy sira
Na dia afaka mirakitra karazana zavamiaina isan-karazany toy ny trondro, trondro, crustacea, zavamaniry anaty rano ary microalgae aza ny fiompiana an-dranomasina, ity modely ity dia hifantoka indrindra amin'ny fiompiana hazandrano amin'ny tontolo amoron-dranomasina.
Ny habetsaky ny famokarana zavamaniry eo anelanelan'ny rano an-dranomasina, vaovao, ary ny savony. Loharano: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikarohana momba ny tsena iraisana
Fa maninona no zava-dehibe?
Tombanana ho 9.7 miliara ny isan'izao tontolo izao amin'ny 2050. Araka ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanana momba ny sakafo sy ny fambolena (FAO), midika izany fa ny famokarana sakafo eto an-tany dia mila mitombo 70% hamaly ny fangatahan'ny mponina manerantany amin'izany taona izany. Fikarohana iray tsy mitsaha-mitombo no mampiseho fa mihazakazaka amin'ny tsy fahampiana ekolojika izao tontolo izao. Tombanana ho 85% ny mponina no monina any amin'ny firenena izay ampiasana haingana kokoa ny harena voajanahary noho ny omen'ny tontolo iainana maharitra. Sehatra lehibe iray ny famokarana sakafo izay tompon'andraikitra amin'ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana, mitentina 25% ny entona entona entona miompana amin'ny tany, 70% ny fampiasana rano velona, ​​ary 80% ny fahaverezan'ny toeram-ponenana. Ny hena toy ny hen'omby sy henakisoa, ankoatry ny karazana proteinina biby an-tanety, dia manana ny taha ambony indrindra amin'ny CO2 fandefasana, fampiasana rano velona, ​​ary fampiasana tany isaky ny fanompoana.
Ny jono sy ny fiompiana anaty ala dia afaka manome loharanom-proteinina tsara kalitao sy mahasalama izay amin'ny ankapobeny dia manana dian-tongotra, karbonina ary rano kely kokoa noho ny fambolena biby eto an-tany. Na izany aza, ny jono sy ny fiompiana anaty dia dia tsy misy fiantraikany. Mihena ny tahiry trondro dia. Tamin'ny taona 2017, latsaky ny 70% ny tahiry trondro dia tao anatin'ny ambina biolojika maharitra, fihenan'ny 20% mahery hatramin'ny taona 1970, ary hatramin'ny 1990, ny jono fisamborana eran-tany dia nitombo 14%. ref Rehefa mitombo ny fangatahana hazan-dranomasina amin'izao fotoana izao ary tratra ny vokatra maharitra indrindra azo avy amin'ny jono dia, ny fiompiana anaty rano dia ho lasa mpamatsy hazan-dranomasina lehibe ho an'ny mponina mitombo isa. Ny aquaculture dia manome rafi-tsakafo hafa izay afaka mamokatra proteinina biby avo lenta izay, rehefa vita amin'ny fomba tsara, dia afaka manana dian-tongotra maharitra. Ampidino eto ambany ny sary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEtomanokatra fisie PDF .
Loharano: angona GHG, FW, ary data LU: Ritchie 2020; FW fampiasana ny angona trondro an-dranomasina: Pahlow et al. 2015; GHG ho an'ny bivalves: MacLeod et al. 2020. angona FCR: Sharpless and Evans 2013; Fanamarihana: ny angona fampiasana FW ho an'ny trondro an-dranomasina dia nalaina tao amin'ny Pahlow et al. 2015 ho toy ny angon-drakitra fototra ao amin'ny Ritchie 2020 ary nahitana dobo anaty rano velona. Ny fampiasana rano velona dia miovaova arakaraka ny karazany sy ny sakafo; Amberjack Japoney no nampiasaina teto.
Tombony azo amin'ny fiompiana anaty rano
Ny vehivavy dia mivarotra trondro any Myanmar. Sary © Michael Yamashita
Ny hazan-dranomasina avy amin'ny jono sy ny fiompiana anaty rano dia manome olona manodidina ny 3.3 miliara miaraka amin'ny 20% eo ho eo amin'ny proteinina biby. ref Mihoatra ny 50% io vola io any amin'ny firenena toa an'i Bangladesh, Kambôdza, Gambia, Indonezia, Sri Lanka, ary firenena mandroso nosy kely (SIDS). Tamin'ny taona 2017, ny trondro dia mitentina eo amin'ny 17% amin'ny proteinina biby manontolo ary 7% amin'ny proteinina rehetra nohanina. Ny SIDA sasany dia mampiseho ny fanjifana hazan-dranomasina lehibe indrindra isaky ny olona eto amin'izao tontolo izao, ary maro amin'izy ireo no tafiditra ao anatin'ny tontolo iainana ny haran-dranomasina tropikaly. Ny fanjifana trondro manerantany dia avo indrindra any Maldives (180 kg / olona isan-taona), izay manome 77% proteinina ho an'ny biby sakafo.
Ny sivy amin'ireo mpanjifa folo ambiny dia firenena nosy sy faritany any Pasifika, faritra iray izay ny fanjifana salantsalany (57 kg / olona isan-taona) dia efa ho avo roa heny noho ny salanisa manerantany. ref Ny fihinanana hazan-dranomasina eran-tany dia nitombo tamin'ny salan'isa 3.1% nanomboka tamin'ny 1961 ka hatramin'ny 2017, taha ambony noho ny sakafo proteinina biby hafa (hena, ronono, ronono, sns.). Any amin'ny firenena vao misondrotra dia nitombo ny fihinanana hazan-dranomasina 17 kg isaky ny kapita tamin'ny taona 1961 ka hatramin'ny tampon'ny 26 kg isan-kapita tamin'ny 2007, ary nihena tsikelikely hatramin'ny 24 kg tamin'ny 2017. ref
Raha jerena ny maha-zava-dehibe ny trondro amin'ny faritra tropikaly sy ny sakafo ara-kolontsaina, ny trondro nohajaina dia mety ho singa lehibe amin'ny fiarovana ara-tsakafo sy sakafo mahavelona any amin'ireo faritra ireo. Ny fiompiana anaty rano dia mety hanana andraikitra lehibe indrindra amin'ireo firenena manana tany fambolena voafetra, hihena ny tahiry hazandrano amam-borona ary rojo famatsiana lava ho an'ny tsenan-tsakafo eran-tany.
Ny vokatra trondro sy trondro dia ekena ho toy ny sakafo mahasalama indrindra eto an-tany ho loharanon'ny asidra matavy Omega 3 lava, loharanon'ny proteinina mahasalama amin'ny fo, ary micronutrients hafa toy ny calcium sy vy. ref Amin'ny ankapobeny, ny jono dia sy ny fiompiana anaty rano maharitra dia zava-dehibe amin'ny sakafo, fiarovana ara-paritra sy eran-tany ary paikady mahavelona ary manana anjara lehibe amin'ny fanovana ny rafi-pisakafoanana sy ny fiatrehana ny hanoanana sy ny tsy fanjarian-tsakafo.
Ny finfish sy ny karazan-javaboary hafa dia mety manana dian-tany ambany kokoa noho ny ankamaroan'ny famokarana hena amin'ny fampiasana rano velona, ​​CO2 emissions, ary fampiasana tany. Ohatra, ny famokarana kisoa dia afaka mampiasa feed hatramin'ny 6 kg, rano 11,110 17.4 litatra, ary hatramin'ny XNUMX m2 tany hamokatra proteinina 1 kg. Etsy ankilany, ny famokarana trondro dia afaka mampiasa feed hatramin'ny 1.2 kg, rano 750 litatra, ary hatramin'ny 8.4 m2 tany hamokatra proteinina trondro 1 kg. Tombony lehibe iray hafa koa ny fahombiazan'ny metabolika ny trondro mihoatra ny biby terestrialy. Ny salmona fambolena dia manana tahan'ny fiovam-po (FCR) manakaiky ny 1, midika izany fa mila fahana 1 kilao ny famokarana lanja 1 kilao. Mifanohitra amin'izany, ny henan'omby dia mety manana FCR manodidina ny 13. Ny tahan'ny fiovam-po dia manan-danja satria ny sakafo bebe kokoa (oh: katsaka, soja, trondro) ilaina mba hamelomana sy hitombo biby, dia vao mainka betsaka ny tany, rano ary loharano ampiasaina amin'ny ankapobeny.
Fiofanana amin'ny fambolena ahidrano anaty rano an'ny vondrona mpanjono manerana an'i Belize. Sary © Julie Robinson
Ny fiompiana anaty rano dia mitana andraikitra lehibe amin'ny asa fivelomana, ny asa ary ny fampandrosoana ara-toekarena eo an-toerana amin'ireo vondrom-piarahamonina amoron-tsiraka any amin'ny firenena vao misondrotra. Amin'ny ambaratonga manerantany amin'ny taona 2018, ny fiompiana anaty rano dia nampiasa olona 20.5 tapitrisa niaraka tamin'ny 85% tamin'ireo tany Azia, izay indostria malaza ny fiompiana anaty rano. Any amin'ny firenena vao misondrotra, ny fiompiana anaty akondro bitika dia mifandraika indrindra amin'ny fiarovana ny asa fivelomana satria mety hanome loharanom-bola lehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana izay mety voafetra na tsy ampy ny asa hafa. ref Ny hetsika anaty akondro, raha tanterahana araka ny tokony ho izy ny loza mety hitranga amin'ny tontolo iainana sy ny fiantraikany, dia afaka manolotra a fivelomana maharitra amin'ny vondrom-piarahamonina amoron-tsiraka.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoInona no atao hoe fiompiana anaty rano?
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanan'ny sakafo sy ny fambolena (FAO) an'ny Firenena Mikambana - AquacULT
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFAO State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)manokatra fisie PDF